Dawlada Puntland oo magacawday guddi ka kooban 9 xubnood oo qaabilsan wacyigelinta bulshada. – Radio Daljir
Dawlada Puntland oo magacawday guddi ka kooban 9 xubnood oo qaabilsan wacyigelinta bulshada.
Luulyo 27, 2010 12:00 b 0
Garowe, July 27 – Maxamed Faarax Ciise ‘Gaashaan’, wasiiru dawlaha maamul wanaaga Puntland oo saxaafada u waramay ayaa ka tafaasiil ka bixiyey kaalinta guddiga ay dawladu magacawday, ee qaabilsan wacyigelinta bulshada. Md. Gaashaan waxaa uu sheegay guddigu in ay u kala baxeen gobollada dalka, ayna kala hadli doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada dagaalka aan xaqa ahayn ee lagu soo qaaday Puntland.
M/weyne Siilaanyo oo magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 20 wasiir & 6 wasiir ku xigeen.
“Isu geyn waa rag 400 ku dhaw oo 3 meelood kala degan; toban nin ayaa ku jira (Pakistan, Ingiriis, Madow)” C/aqadir Maxamed oo ka mid ah dadka deggan Galgala, goobjoogna u ahaa dagaalkii Galgala (VOA).